Ndị Fụlani abụghị ogbu mmadụ -- Okorọcha
Gọọmenti Anambra Ga-Etinye Ijeri Naịra Iri N'Ọrụ Okporo Ụzọ – Obianọ...
Gọọmenti Steeti Anambra ekwuola na ọ ga-etinye ego dị ijèri Naịra iri n'ọrụ okporo ụzọ dị iche iche na steeti ahụ, iji hụ na a rụchapụrụ ha tupuu oge udu mmiri eruo.
Ụgbọ Òlòkó Akwọrịkọọ Mmadụ Abụọ n'Abagana, Bibìé Ọtụtụ Ihe...
Dịka e kwuru na ihe onye zùnyere ọ bụrụ akara ya, otu ụgbọ òlòko (trailer) akwọọla mmadụ abụọ ka akamụ n'Abagana dị n'okpuru ọchịchị Njikọka nke steeti Anambra.
A Ga-Etecha Ụzọ Isekke–Mbọsị–Azịa–Ụkpọr Tupuu Oge Ùdú Mmiri – Obianọ...
Gọọmeenti steeti Anambra emeela ka a mara na ya ga-etecha okporo ụzọ ahụ siri Isekke gaa Mbọsị gaa Azịa wee pụta Ụkpọr tupuu oge ufu mmiri eruo n'ahọ a.
Ọkụ Ọgbụgba Egbuola Ụmụaka Atọ n'Obosi, Gbarìkọọ Ebe A Na-Añụ Mmanya...
Dịka a sị na chi na-abọ, ihe ọjọọ ana-abọta, ọkụ ọgbụgba agbagbuola ụmụaka atọ n'Obosi dị n'okpuru ọchịchị Idemili North nke steeti Anambra. Ya bụ ajọ ọdachi bụ nke dapụtara dịka ọkụ binwùùrù n'ebe a na-ere ahịa dị na mpaghara okporo ụzọ 'High Tension School'.
Oke Ọñụ Adaa Dịka Lọọlọ Ezenneka gbàrà Ahọ Otu Narị...
Ọ bụ oge òtùtó, okwu mwulite mmụọ na oke ọñụ dị egwu dịka Lọọlọ Elizabeth Ezenneka mere mmemme nchèta ọgbụgba ahọ otu narị e jiri mụọ ya.
Obianọ Akpọọ Òkù Ka A Kwàlite Ịdị n'Otu, Mmekọrịta Obodo Na Ibe Ya...
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ akpọkuola ndị eze ọdịnala obodo dị iche iche na steeti ahụ ka ha na-akwàlite udo ime-ime obodo na mmekọrịta obodo na ibè ya.
Umeh Akpọkuo Ndị Igbo Ka Ha Na-Akwàlite Asụsụ Na Njirimara Ha...
Dịka ọ bụ ihe doro ewu na ọkụkọ anya na asụsụ na omenala Igbo na-anwụzị anwụ, a kpọkuola ụmụ Igbo n'ebe dị iche iche ka ha na-echekwaba njirimara na omenala Igbo, ka ọ o wee ghàrá ịnwụnyụ anya.
Bishọọpụ Edith Enyere Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ Aka Site n'Òtu Ọrụ Obi Ebere Ya...
Afọ Juru M Banyere Otu Ọrụ Sị Aga n'Àkwà Ohiri Niger Nke Abụọ --- Obianọ...
Gọvanọ Willie Obianọ nke steeti Anambra ekwupùtala afọ ojuju ya bànyere otu ọrụ si aga n'àkwà Ohimiri Niger nke abụọ na ogoogo e ji were arụ ya bụ ọrụ, ma kwe nkwà ịkpọta onyeisi ala Nigeria bụ Muhammadụ Buharị ka ọ bịa werekwa anya ya hụ oge adịghị anya.
Aka na-achị Steeti Imo bụ gọvanọ Rochas Okorọcha adọọla ọha mmadụ aka na ntị ka mmadụ ọbụla gharakwa ịnwa anwa kpọọ ndị Fụlani 'ndị ogbu mmadụ' ọzọ n'ihi na aka ha dị ọcha banyere mgbusi ahụ ndị na-achị ehi na-egbusisi mmadụ na mpaghara dị iche iche n'ala anyị.
Gọvanọ Okorọcha dọrọ aka na ntị a ụbọchị ụka gara aga mgbe ndị ụka "Sacred Order of Cherubim and Seraphim" bịara kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti dị n'Owerri, ha na onyeisi ha bụ Solomon Alao.
N'ebe o metụtara iweputa ala maka ndị Fụlani na-achị ehi na steeti Imo dịka gọọmenti etiti siri nye ntụziaka; gọvanọ Okorọcha kwuru na e nweelarị ahịa maka ndị Fụlani na-achị ehi na steeti ahụ, ma sịkwa na ọchịchị ya na-akwàdo ịzụ ehi n'ihi na ọ bụ aka ọrụ magburu onwe ya. O kwukwara na ọchịchị ya ga-akwàdo ịrụpụtara ndị ahụ agbụgbọ ehi, bụ ebe ha ga na-edebe ehi ha.
Ọ sị hoohaa na onye ọbụla na-egbusi mmadụ kwesiri ka a taa ya ahụhụ dịka onyeohi, dịka o siri dị n'usoro iwu na-achị ala anyị, ma kwuo ka mmadụ ọbụla gharazịkwa iji maka otu ndị amaghị ndị ha bụ si egbusi mmadụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị wee sịzie na ndị Fụlani bụ ndị ogbu mmadụ.
Otu ọ dị, ndị otu "Biafra Independent Movement" bụ BIM n'aha ịchafụ ekwuola ka steeti ọbụla na mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ gharakwa ịnwa anwa nye ndị Fụlani na-achị ehi ala na mpaghara ahụ n'ihi na nke ahụ ga-eweta ndị Igbo ịnọ n'okpuru ndị Fụlani n'ala Igbo.
Nke a dị n'ozi ndị otu a kụpụrụ site n'aka onye nhazị ha na mpaghara ọgbọ nta nkwàdo Anambra Nọọtụ bụ maazị Vincent Iloh.
Ozi ahụ kọwakwàrà na ndị Fụlani ahụ na-achị ehi nọ kemgbe ụbọchị wee na-eyi ndị mmadụ egwù na steeti dị iche iche ugbu a ha enwebeghị ebe a kpọrọ nke ha n'ebe ndị ahụ, ma jụzie kedụ ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na e nyezie ha ala na steeti dị iche iche. Ha kwuru na azịzá nke ahụ pụtara ihe n'ezie maka na a na-esi n'isi ahụrụ wee mara ụtọ nsị.
Ndị otu a mekwara ka a mara na ha nọ ugbu a wee na-eche ka ha hụ gọvanọ ọbụla na mpaghara ala Igbo ga-anwa anwa nye ndị Fụlani ahụ ala, ka ha gosi gọvanọ ahụ na ọ bụghị ya jiri aka ya tinye onwe ya n'ọkwa, maka na ha agaghị anọ gba nkịtị mmadụ ọbụla ewere ndụ ụmụafọ Igbo wee na-eti èpèlé.